Ifulethi elisenhlizweni ye-Liège (Kuthule kakhulu) - I-Airbnb
Ifulethi elisenhlizweni ye-Liège (Kuthule kakhulu)
Liège, Wallonie, i-Belgium
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Maxime
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Maxime izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elisanda kulungiswa enkabeni ye-Liège (umgwaqo wabahamba ngezinyawo ongu-50 m ukusuka e-cathedral square, eduze kwamabha kanye nezindawo zokudlela eziningi) kodwa ethulile ngokwedlulele. Ngeke uzwe umsindo ngisho newindi livuliwe! Eduze kwesiteshi saseGuillemins nazo zonke izinto eziheha izivakashi (isikwele, izitolo, amasinema, amathiyetha, i-opera, iForamu, iminyuziyamu, amahholo ekhonsathi, ...)
Ifulethi elingu-50m2 livuselelwe ngokuphelele, lihlonyiswe futhi lithule ngokwedlulele naphezu kwendawo yalo emaphakathi. Izuza kukho konke ukunethezeka okudingekayo ukwenza ukuhlala kwakho kube yimpumelelo.
I-TV ikuvumela ukuthi ungene ku-akhawunti yakho ye-Netflix. Ikhebula le-HDMI linikeziwe ukuze likuvumele ukuthi uxhume ikhompyutha yakho.
Ukuze ulale, umbhede ophindwe kabili kanye nombhede kasofa oyimojuli futhi onethezekile (ububanzi obuyi-1.40 m) nawo uyatholakala.
Sicela uqaphele ukuthi amathawula okugeza awanikeziwe.
4.63 · 70 okushiwo abanye
I-Rue Pont d'Avroy ingumhambi ngezinyawo omatasatasa nodume kakhulu e-Liège. Usenkabeni yedolobha, esikhungweni se-hyper-center. Abathandi bokuthenga nempilo yasemadolobheni bazothola abakufunayo ezitolo nezindawo zokudlela eziningi endaweni. Useduze neCathedral Square, futhi eduze kwesikwele esidumile. Siyakwamukela enhliziyweni yedolobha elivuthayo.